Ruushka wuxuu dib u bilaabay duulimaadyada Mareykanka, Talyaaniga, Beljam, Bulgaria, Jordan, Ireland, Cyprus, iyo Waqooyiga Macedonia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Ruushka » Ruushka wuxuu dib u bilaabay duulimaadyada Mareykanka, Talyaaniga, Beljam, Bulgaria, Jordan, Ireland, Cyprus, iyo Waqooyiga Macedonia
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Ruushka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Waqtigaan la joogo, kuwa xambaara Ruushku kuma deg degi doonaan inay si firfircoon u amaahdaan kootada la siiyay.
Go'aankan xarunta wuxuu ka dhigan yahay in shirkadaha diyaaradaha Ruushka ay dib u bilaabi karaan duulimaadyadii ay ku tagi jireen dalalkan.
Shirkadaha diyaaradaha ee Ruushka ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan duulimaadyadooda kaliya dalalka Talyaaniga, Bulgaria, iyo Qubrus.
Duulimaadyada u dhexeeya Ruushka iyo dalalkaas waa la joojiyay sannadka 2020 iyada oo ay jirto cudurka faafa ee COVID-19.
Masuuliyiinta Ruushka ayaa maanta ku dhawaaqay in laga bilaabo Juun 28, Ruushka uu si rasmi ah dib ugu bilaabay duulimaadyada diyaaradaha Mareykanka, Talyaaniga, Belgium, Bulgaria, Jordan, Ireland, Cyprus, iyo North Macedonia
Go'aanka dib loogu bilaabayo duulimaadyada waxaa qaatay xarunta howlgalka ee la dagaalanka coronavirus bishii Juun 18. Isla waqtigaas, tirada kootada duulimaadyada ee dalal dhowr ah ayaa sii kordheysa.
Go'aankan xarunta wuxuu ka dhigan yahay in shirkadaha diyaaradaha ay dib u bilaabi karaan duulimaadyadii ay ku tagi jireen dalalkan. Waqtigaan la joogo, shirkadaha diyaaradaha ee Ruushka waxay ku dhawaaqeen inay diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan duulimaadyadoodii oo kaliya Talyaaniga, Bulgaria, iyo Qubrus.
Xarunta hawlgalku waxay oggolaatay in la furo duullimaadyada ka imanaya Moscow illaa Washington iyo New York laba jeer usbuucii (taas oo ah, xamuulka Ruushka iyo kan ajnabiga ahba waxay awoodi doonaan inay midkiiba shaqeeyaan laba duulimaad). Duulimaadyada ka imanaya Moscow ilaa Brussels (afar jeer usbuucii), Moscow ilaa Dublin (laba duulimaad), Moscow ilaa Rome iyo Milan (laba duulimaad), Moscow ilaa Venice iyo Naples (afar duulimaad), Moscow ilaa Larnaca (afar duulimaad) ), laga bilaabo Moscow ilaa Paphos (saddex duulimaad).
Masuuliyiintu waxay sidoo kale ansixiyeen dib u bilaabida duulimaadyada udhaxeeya Russia iyo Bulgaria: Sofia, Varna, Burgas waxay u furan yihiin duulimaadyada ka imanaya Moscow iyo gobolada labadaba (Moosko - afar duulimaad usbuucii, laga bilaabo gobolada - mid).
Waqtigaan la joogo, kuwa xambaara Ruushku kuma deg degi doonaan inay si firfircoon u amaahdaan kootada la siiyay. Xilligan la joogo, Aeroflot ku dhawaaqay qorshayaasha lagu furayo duulimaadyada Moscow ilaa Sofia iyo Burgas bisha Luulyo, waxaa la qorsheynayaa in afar duulimaad la sameeyo usbuucii.
Sidoo kale, xarunta howlgalka ayaa isku raacay in la kordhiyo duulimaadyada taga Vienna, Azerbaijan, Yerevan, Qatar, Belgrade, Helsinki, Zurich. Split, Dubrovnik, Pula, Geneva sidoo kale way u furan yihiin duulimaadyada. Intooda badan, qoondada duulimaadyada Giriigga waa la kordhiyay. Marka laga soo tago kordhinta duulimaadyada inta badan ka yimaada Moscow ilaa Athens, xarunta waxay ka furtay duulimaadyada Moscow iyo gobollada Tesaloniki, Heraklion, Corfu, iyo Rhodes.